Madaxda dowlad goboleedyada oo shir ka yeeshay xaaladda dalka | Banaadir Times
HomeUncategorisedMadaxda dowlad goboleedyada oo shir ka yeeshay xaaladda dalka
Madaxda dowlad Goboleedyad dalka kajira oo ku sugan dhamaandood Magaalada Dhuusamareeb ee Caasimadda Galmudug ayaa waxaa ay yeesheen kulan ay uga hadlayeen xaalada siyaasadeed ee dalka iyo sida ay noqon doonto.
Madaxweynayaasha, Galmudug, Hir-Shabeelle, Jubbaland, Puntland, iyo Koonfur Galbeed ayaa shir xalay Dhuusamareeb uga qabsoomay waxa ay uga hadleen sida ay noqon karto xaalada dalka wixii ka dambeeya 8-da Febaraayo maadaama uu dhamaaday mudada xilheynta Madaxweyne Farmaajo.
Kulankooda ayaa waxaa ay ku falan qeeyeen xaalada siyaasadeed ee dalka, iyaga oo ujeedka kulankooda uu yahay sidii loo keeni lahaa xal kale oo ku aadan arrimaha doorashooyinka madaama uu fashilmay shirkii Magaalada Dhuusamareeb.
Wararka ayaa sheegaya in madaxda shanta dowlad goboleed ay sii joogi doonaan Dhuusamareeb illaa labo cisho, waxaa ay ka qeyb geli doonaan Munaasabadda Sanad guurada koowaad ee doorashadii Madaxweynaha Galmudug Axmed XCabdi Kaariye Qoorqoor.
Wararka laga helayo kulanka ayaa waxaa ay sheegayaan in Madaxweynayaasha shanta Maamul Goboleed ay War murtiyeed ka soo saari doona xaalada siyaasadeed ee dalka.
Shirkii Magaalada Dhuuamareeb uga qabsoomay Madaxda dowladda, Dowlad Goboleedyada iyo Guddoomiyaha Gobolka Banaadir ayaa wax natiijo ah kasoo biixn, waxaana taasi ay walaac badan ku abuurtay saamileyda siyaasadeed ee dalka.
Previous articleDowladda Soomaaliya oo sheegtay inay dagaal ku dishay Xubno ka tirsan Al-Shabaab
Next articleWeerar khasaaro geystay oo ka dhacay Magalada Baydhabo